‘सस्तोको पछि नलाग्नुस् गुणस्तरमा ध्यान दिनुस्’ -::DainikPatra
मोहन ठाकुर, रुपन्देहीको देवदह खैरेनीमा जन्मिएका व्यक्ति हुन् । उनी अहिले युनिसेक्स सैलुन सञ्चालनमार्फत् चर्चामा रहेका छन् । उनले सञ्चालन गरेको निल डेभिड सैलुन बुटलवको अमरपथमा रहेको सिंह कम्प्लेक्समा रहेको छ । उनै ठाकुरसँग दैनिक पत्रको लागि पूजा पन्थीले तयार पारेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
के हो निल डेभिड ?
पश्चिम नेपालमा पुरुष र महिलाको हेयर काम गर्ने पहिलो सैलुन निल डेभिड सैलुन नेपालकै पहिलो युनिसेक्स सैलुन हो । जुन सैलुन नेपालमा सन् २००७ सालमा स्थापना भई भारतमा गएर ५० भन्दा बढी शाखा विस्तार गरेको छ । जसको शाखा नेपालमा १० भन्दा माथि रहेका छन् । यहाँ महिला र पुरुष दुवैका लागि केश काट्ने, श्रृङ्गारलगायत सम्पूर्ण सौन्दर्य सम्बन्धि काम गरिने ठाउँ हो ।
यसको परिकल्पना कसरी आयो ?
यो एक अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड हो । बुटवलमा जति पनि सैलुनहरु छन् सबै परम्परागत मात्र छन् । यानि कि पुरुषको छुट्टै महिलाको छुट्टै छ । निल डेभिडजस्तो थिएन अथवा छैन भनौ । त्यसैले सरसफाई, स्वास्थ्य र गुणस्तरका हिसाबले पनि ग्राहकलाई सौन्दर्य क्षेत्रमा फरक स्वाद दिनको लागि यो खोलिएको हो ।
कति लगानी लगाएर खोल्नु भो ? अहिलेकति छ ?
०७३ श्रावण १४ गते यसको स्थापना भएको थियो । सुरुमा मैले १० लाख लगानी गरी सुरु गरेको हुँ । अहिलेसम्म आईपुग्दा यसको लगानी ४० लाखभन्दा माथि पुगेको छ ।
ग्राहकको माग आवतजावत कस्तो छ ?
म निकै सन्तुष्ट छु ग्राहकको उपस्थिति र मागले । संख्यामा कुनै एकिन नै हुँदैन उहाँहरुको आवत÷जावतले ऊर्जा र जोश दिनहुँजसो बढिरहेको छ । ग्राहकको उपस्थित संख्या दैनिकीजसो ३० देखि ४० हुन्छ । सबैजनाले राम्रो काम र गुणस्तरीय सामान भनेर प्रशंसा गर्दा व्यवसायमा सफलता मिलेको छ ।
रोजगारको कुरा गर्दा यहाँ आवश्यक कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । सञ्चालकबाहेक प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार ८ जनालाई दिएको छु । जसमा ४ जना महिला र ४ जना पुरुष हुनुहुन्छ । सैलुनमा सिक्न चाहनेहरुलाई हामी सिकाउँछांै पनि र उत्कृष्टलाई रोजगार पनि दिने गरेका छांै ।
के–के सुविधा दिनुभएको छ ?
हेयर कट, हेयर कलरिङ, केराटिन, फेसियल, मेकअप, हेयर स्ट्रेटनिङ, रिवोन्डिङ, हाइलाइट, मेनिकेयर, पेडिकेयर, हेयर स्पा लगायत सम्पूर्ण सुविधाका साथ श्रृङ्गार गर्छांै । साथै दुलाह, दुलही दुवैको ब्राइडल मेकअप घरमै गएर गर्छांै ।
कत्तिको सजिलो छ यो व्यवसाय ?
धेरैजसोलाई लाग्ने गर्छ यो निकै सरल अनि सजिलो व्यवसाय हो भनेर । यो देख्दा जति सजिलो छ गर्दा उति नै जटिल । प्रायःजसोले भन्ने गर्नुहुन्छ आखिर के नै पो हो र कपाल काट्ने, मेकअप गर्दिने त हो भनेर सामान्य रुपमा लिने गर्नुहुन्छ जुन एकदमै गलत हो । यस व्यवसायको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यक पर्छ । यस व्यवसायमा गुणस्तरलाई मुख्य रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यो विशेषगरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने हुँदा गुणस्तरीय सामानको प्रयोग, दक्ष जनशक्ति, ग्राहकको विश्वास हुनु जरुरी छ ।
तपाई बेराजगार युवाहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
खाली बस्नुभन्दा सीप सिक्नु धेरै राम्रो हो । आफूलाई जुन क्षेत्रमा रुचि छ त्यसमा सीपमूलक ज्ञान सिक्ने हो भने छिट्टै रोजगार हासिल गर्न सक्न्छि । यसले दिगो फाइदा हुन्छ, बेरोजगारी हट्दै जान्छ, परिवारलाई टेवा पुग्छ, आत्मनिर्भर हुन्छ साथै देश, समाज सबैलाई फाइदा पुग्छ । अहिलेका युवाहरुमा भ्रम छ कि वैदेशिक रोजगारले मात्र आफ्नो आवश्यकता, रहर पूरा गर्न सकिन्छ जुन गलत हो । नेपालमै बसेर पनि केहि सिप सिकेर काममा लगनसिल भएर लाग्ने हो भने सोचे जस्तो आर्थिक आर्जन गर्न सकिन्छ र भविष्य राम्रो बनाउन सकिन्छ । त्यसैले म यहि भन्न चाहान्छस कि सिप सिक्नु होस र आफु रुची व्यवसाय गर्नुहोस सफलता अवश्य मिल्छ ।
तपाईको उद्देश्य के हो ?
मेरो उद्देश्य भन्नु नै सेवाग्राहीहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो । सर्वसाधारण अर्थात सेवाग्राहीहरु सस्तोको पछि लाग्दा विभिन्न समस्याहरु आउँछन् । केही रुपैयाँ बढी पर्ने भएपनि गुणस्तरीय सामग्रीहरु प्रयोग गर्नको लागि जानकारी प्रदान गर्ने हो । यहाँ मेरोमा नै आउनुस् भन्न खोजेको होइन तर गुणस्तरीय वस्तुको प्रयोग गर्नुहोस् । किनकि सौन्दर्य तथा केशको स्याहार गर्दा स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । तपाईले गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गर्नुस् । तपाई गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्नुभयो भने हामीपछि गएर त्यसलाई निको बनाउन गाह्रो हुन्छ ।